Ihe ị ga - eme mgbe ị zutere izu ohi njirimara na onntanetị | ECommerce ozi ọma
Ihe ị ga-eme mgbe ị na-eche ohi njirimara
Taa, anyị ga-ekwu maka izu ohi njirimara, ebe ọ bụ na n'ime ụwa zuru ụwa ọnụ nke e-commerce e nwere ụzọ dịgasị iche iche iji kpọsaa dị ka netwọk mmekọrịta, mmetụta dị ike na mkpebi ndị dị ugbu a ịzụta na ire ngwaahịa na ọrụ.
Ọtụtụ oge n'ime netwọk ndị a, enwere ndị na-eme ka hà bụ onye ọzọ, iji nweta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ n'aha onye na-ejide ya na-amaghị ihe na-eme, yabụ ohi njirimara bu okwu di ugbua kwesiri ekwesi.
2 Gịnị ka ha na-egosipụta?
3 Olee ụzọ dị iche iche a ga-esi ersonomie mmadụ?
4 Olee ụzọ dị iche iche a ga-esi ersonomie mmadụ?
5 Kedu ka esi belata ihe ize ndụ nke ozi ezuru?
5.1 Iji belata ihe ize ndụ nke ịbụ onye na-agba agba n'ịntanetị, nke a bụ ụfọdụ ndụmọdụ.
6 Kedu ihe ị ga-eme mgbe ị na-ezu ohi njirimara?
Nsogbu na mpụ dị ugbu a n'ọtụtụ ọnọdụ bụ izu ohi njirimara, ma ọ bụ n'ozi email gị, na ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa ndị a zụtara n'ịntanetị ma ọ bụ na netwọkụ mmekọrịta gị. Iji dozie nke a, a na-atụ aro ka ị gụọ edemede a ruo n'isi, lee ndị bụ isi okwu ikpe na otu esi egbochi ha.
Ngosipụta na-egosi dị ka onye ọzọ na thentanetị iji rụọ ọrụ iwu na-akwadoghị.
Gịnị ka ha na-egosipụta?
Ọ bụ ezie na ihe kpatara ya na-agbanwe n'ọtụtụ ọnọdụ, okwu a na-ahụkarị bụ ịkpasu iwe ma ọ bụ ịmara ihe gbasara onye ahụ e mere ka ọ bụrụ onye ọzọ. A na-emekwa nke a Iwu na-akwadoghị na -emepụta profaịlụ ime mpụ wayo n'aha ndị ọzọ.
Ebe a na-ahụkarị ebe a na-eme ihe ndị a bụ na isi netwọk mmekọrịta ebe m nwetara ihe niile ozi nkeonwe nke onye ọrụ kpọmkwem dị mfe ma na aka, yana mepụta profaịlụ adịgboroja na foto ndị ezuru iji gosipụta onye ahụ.
Banyere profaịlụ nke ndi mmadu ndị metụtara ịbụ onye, Ha bụkarị ndị nwere ozi nkeonwe gị dịka aha na aha nna, ụbọchị na ebe a mụrụ gị, foto, wdg. Na netwọk mmekọrịta ọha na eze, ya bụ, egbula onye nwere ike ịnweta data a. Ndị mmadụ na-echekarị na nke a na-eme ndị ọha na eze dịka ndị egwuregwu ma ọ bụ ndị na-ese ihe, nke bụ ụgha, onye ọ bụla nwere ike ịbụ onye e gwuru wayo.
Olee ụzọ dị iche iche a ga-esi ersonomie mmadụ?
Ingnweta akaụntụ ahụ n'ụzọ na-akwadoghị. N'ụzọ dị otú a, onye ahụ mejọrọ aghaghị inweta koodu nnweta nke kwekọrọ na nke onye ahụ, ma ọ bụ site n'ịkọ nkọ, site na a phishing, ma ọ bụ ụfọdụ ụdị malware iji nweta ya.
Mepụta profaịlụ ọhụrụ na nke adịgboroja, na ngụkọta ma ọ bụ ozi ezughị ezu nke onye ahụ aja. Ọ dị nnọọ mfe karịa nke mbụ, ebe onye omekome ga-ahọrọ onye ahụ, chịkọta ozi ha ma mepụta profaịlụ.
Creatmepụta profaịlụ ụgha iji dochie njirimara nke onye ọ bụla bụ mpụ nke na-emebi ikike nke ọdịdị mmadụ dị ka ekwuru na edemede 18 nke Iwu Spen, na mgbakwunye na eziokwu ahụ bụ na edemede 401 nke usoro ntaramahụhụ na-egosi na ị nwere ike ịga n'ụlọ mkpọrọ maka iwu a.
Nweta akaụntụ onye ọrụ ọzọ. Eziokwu a na-ekpesa n'ihi na ọ na-awakpo nzuzo nke onye ahụ, onye omempụ na-enwetakwa ebubo abụọ, maka ịbanye na akaụntụ na-akwadoghị na ịnweta paswọọdụ na-ekwesịghị ekwesị.
Mepụta profaịlụ ọhụụ na nke ụgha, yana ngụkọta ma ọ bụ ozi ezughị ezu nke onye emetụtara. Ọ dị nnọọ mfe karịa nke mbụ, ebe onye omekome ga-ahọrọ onye ahụ, chịkọta ozi ha ma mepụta profaịlụ.
Mepụta profaịlụ ụgha iji gosipụta onye ọ bụla bụ mpụ nke ahụ megidere ikike mmadụ nwere ịdị ka nke ekwuru na edemede 18 nke Iwu Spen, na mgbakwunye na edemede 401 nke koodu ntaramahụhụ na-egosi na ị nwere ike ịga mkpọrọ maka mpụ a.
Kedu ka esi belata ihe ize ndụ nke ozi ezuru?
Iji belata ihe ize ndụ nke ịbụ onye na-agba agba n'ịntanetị, nke a bụ ụfọdụ ndụmọdụ.
Iji mgbagwoju anya okwuntughe iji nweta profaịlụ nke netwọk mmekọrịta. Youchọghị okwuntughe ogologo, mana ihe na-arụ ọrụ iji nwekwuo nsogbu ịchọta ya bụ itinye mkpụrụedemede ukwu na obere mkpụrụ na nọmba.
Mara ihe phishing. Nke a bụ omume a na-ahụkarị nke iziga ndị metụtara, ozi ịntanetị ma ọ bụ ozi site n'ụzọ ndị ọzọ, ndị na-arịọ ka o mezie profaịlụ nke netwọkụ mmekọrịta nke ha chọrọ iji nweta paswọọdụ gị, n'okpuru mgbaghara ọ bụla, ka ị wee tinye njikọ a gosi akaụntụ gị ma si otú a, onye omekome ahụ ga-enweta ozi na paswọọdụ gị.
Mee profaịlụ onwe gị dị ka nzuzo dị ka o kwere mee, si otú a gbochie ndị ọrụ a na-amaghị ama, na mpụga mmekọrịta gị, na ịnweta ozi nkeonwe gị. Ihe ị ga-atụle bụ mgbe ị nabatara ndị enyi, nke mbụ, chọpụta ndị ha maara, yana gbalịa chọpụta ihe mere m ji tinye gị ma ọ bụ maka ebumnuche ọ bụrụ na ha amaghị onwe ha.
Ekekọrịtala foto nke onwe gị ma ọ bụ vidiyo. Ndị omekome na-achọ ihe ndị a ma wepụ ego n'aka ndị ahụ metụtara na ha chere na ọ bụrụ na ha emezughị ihe ndị a chọrọ, ha ga-eme ka ọha na eze mara ozi a.
Nyochaa usoro ọrụ na iwu nzuzo nke peeji nke anyị na-enye ha ohere site na akaụntụ anyị, ịmara ihe ha kesara data gị, otu ha ga-esi emeso ha ma ọ bụrụ na ha na ndị ọzọ na-ekerịta, wdg.
Ọ bụrụ na omume usurpation nwere naanị aha, na-enweghị foto ma ọ bụ ozi ndị ọzọ, ọ nwere ike ịbụ a namesake na i gaghá »‹ ewere ihe á »bá» legal la ikpe.
Maka Ọ bụrụ na profaịlụ ahụ na-eji foto anyị ma ọ bụ data anyị eme ihe, iwu na-akwadoghị ga-eme.
Omume a na-ata gị ahụhụ site na edemede 401 nke Penal Code, dị ka mpụ nke izu ohi njirimara, na mkpọrọ nke ọnwa isii ruo afọ atọ.
Kedu ihe ị ga-eme mgbe ị na-ezu ohi njirimara?
Nke mbu, I ghaghi mata profaịlụ adịgboroja, Na netwọk mmekọrịta nke ọ dị, ihe atụ Facebook na-enye gị ohere ịkọ maka ihe ndị a, ya mere ọ dị mkpa ka ọ ghara ịga n'ihu iji ozi gị.
Ị nwere ike tinye akwụkwọ mkpesa gị na ndị ọrụ nchekwa na ndị isi (FCSE). Ikwesiri inye ihe akaebe banyere otu ị si adị aja nke njirimara njirimara. Inwe ihe akaebe banyere nke a, chekwaa nseta ihuenyo nke profaịlụ adịgboroja, yanakwa ozi nke gị ma a na-eji nsogbu eme ihe.
Gha O nwere ike ime onye ọ bụla, n'agbanyeghị ma ọ bụrụ na ha nwere profaịlụ na netwọkụ mmekọrịta ma ọ bụ na ọ bụghị. Maka nke a, anyị kwesịrị ị na-achọgharị aha anyị oge niile ka anyị mara ihe a na-ebipụta na ntanetị gbasara anyị na ihe kpatara ya.
25% nke ndị Spain nwere akaụntụ na netwọkụ mmekọrịta, na-ekwu na ha nwere mpụ a n'oge ụfọdụ.
Otú ọ dị, ọ dịghị mkpa na ị ga-abụ onye a ma ama ka onye ọ bụla nwere ike iji ya eme ihe. Iji maa atụ, ikpe gbasara otu nwa agbọghọ onye zuburu njirimara ya iji mepụta profaịlụ na saịtị mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ma soro ụmụ nwoke ndị ọzọ nọchitere ya. Enwekwara ike ịkwa iko tupu ụlọ ọrụ akwụmụgwọ, kaadị kaadị na ọbụlagodi na ndekọ obodo.
Tinye akwụkwọ mkpesa gị na ụlọ ọrụ gọọmentị: Ozugbo anyị matara banyere iwu na-akwadoghị, ị ga-agarịrị ụlọ ọrụ iji tụlee ihe nwere ike ịpụta.
Ikwu ugwo nke ugwo: Ọ bụrụ n ’izu ohi njirimara ka achọrọ gị ịkwụ ego na-enwetụbeghị, ị nwere ike ịrịọ n’ihu ardslọ Mkpezi Ndị Ahịa. I nwekwara ike ime mkpesa na Telecommunications User Service Office.
Gakwuru onye ji ụgwọ ahụ kagbuo ya: Ọ bụrụ na onye aja ahụ maara na etinyela data ha na faịlụ mmekpa ahụ maka ịjụ ịkwụ ụgwọ maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha na-azụghị, ha ga-agakwuru ụlọ ọrụ ma ọ bụ onye na-ebo ha ebubo na ha chọrọ kagbuo ụgwọ ha ji, nakwa ka ewepụ gị na ndepụta ndị a kpọtụrụ aha, na-enye gị otu ihe akaebe njigide.
Akwụkwọ: Ọ bụrụ na nwa amaala ekpebie ịkọ ohi njirimara, ọ dị mkpa iburu akwụkwọ niile na-egosi ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ a na-ekwu maka nkwekọrịta ya, na-egosi nọmba akaụntụ metụtara yana ịgbakwunye ederede ederede nke ezigara na ụlọ ọrụ ahụ. Ọ dị oke mkpa ịnye akwụkwọ ọnụahịa maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ metụtara ihe omume ahụ.
Ohi njirimara bụ nnukwu nsogbu mmekọrịta mmadụ na ibe ya, nke na-awakpo mmadụ niile aghara aghara, na-enweghị ọdịiche nke agbụrụ, agbụrụ ma ọ bụ nkwenye, Internet, site n'ịghọ netwọkụ ghe oghe, na-enyekwa ohere ntinye nke ndị nwere oke obi ọjọọ, yabụ anyị ga-echedo ozi anyị mgbe niile, na karịa ihe niile ịmara nke ọma onye anyị na-enye ya, n'ihi na n'oge a ole na ole weebụsaịtị nwere ike ịtụkwasị obi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ọzụzụ ECommerce » Ihe ị ga-eme mgbe ị na-eche ohi njirimara
Ndụmọdụ na ntuziaka maka etu esi amalite azụmaahịa
Esi wepu aha na Facebook